#IBC2018 Exhibitor Spotlight: Osprey Video – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » အသားပေး » #IBC2018 ပြသခဲ့သည် Spotlight ကို: Osprey ဗီဒီယို
#IBC2018 ပြသခဲ့သည် Spotlight ကို: Osprey ဗီဒီယို
Osprey ဗီဒီယို မှာနည်းပညာကသူတို့အထင်ကြီးလိုင်းပြပါလိမ့်မည် IBC2018, ရပ်တည်ချက်မှာ RAI အမ်စတာဒမ် 7.D19။ ပြသခဲ့သည်အစွမ်းထက်သက်သေခံဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် 12G-SDI နှင့် 3G-SDI PCI Express M.2 Raptor Capture အကဒ်များ။ နှစ်ဦးစလုံးယူနစ် feature: SimulStream | Input Signal အပြောင်းအလဲများမှချောမွေ့စွာ adapter | ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး | အချက်ပြ INSERT ၏ထုံးစံဆုံးရှုံးမှု | ရေစာ | CC ကို Overlay ကို | VBI Extraction | CC ကို Extraction | အလိုအလျောက်ထုတ်လွင့်ထောက်လှမ်းခြင်း | Image ကိုထိန်းချုပ်ရေး (Procamp) | de-interlacing | တစျခုမှာ Host ကကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အတွက်အကွိမျမြားစှာကဒ်များ | စာသားမ Overlay ကိုသို့မဟုတ် System ကိုအချိန်နှင့်နေ့စွဲ | Dual-Mono အဘိဓါန်အသံ | အားလုံး Raptor ကဒ်များများအတွက်ညျ့ဝယာဉ်မောင်း။
Opsery ရဲ့အင်္ဂါရပ် SimulStream နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်သောသူတို့၏, ရှိသမျှ SDI မော်ဒယ်များပေါ်မှာဤ standard feature အဘို့, ချုံ့ချဲ့ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး, တစ်ခုချင်းစီ input ကိုအရောင်အာကာသများအတွက်လုံးဝလွတ်လပ်သော setting များကိုအတူမျိုးစုံအပြိုင် output ကိုစီးထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု စာတန်း နှင့်ထပ်မျိုးစုံ applications များမှတစ်ပြိုင်နက်ဖြန့်ဝေပေး။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည် 12G-SDI နှင့် 3G-SDI ၏အမျိုးမျိုး: 12G သွင်းအားစုတက် DCI 2160P60 / 3G မှ & Models အပေါ် 1080P60 / ဗီဒီယိုတနေရာမှတက် inputs: Input / SimulStream နှုန်း 945 / 1215 / 1225 / 1245 / 1285 / 16 အသံလိုင်းများ / MediaLooks SDK ကိုပံ့ပိုးမှု / လွတ်လပ်သောစကေးနှင့်နှုန်းကူးပြောင်းခြင်း / လွတ်လပ်သော Sacling တစ်ခုချင်းစီကို Input တစ်ခု Frame ကနှုန်းကူးပြောင်းခြင်း Frame ။ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ / ပြင်ပ application များအတွက် 915,916,925,927,935,914,924 -0 ဒီဂရီ C မှာ, Coates ၏တွေမှာ Passive အအေးခံခြင်း / တိုးချဲ့အပူချိန် Range နှင့် 60yr အာမခံတိုးချဲ့: ဒါ့အပြင်အဲဒီမော်ဒယ် (3) feature သော Osprey မျးခံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Osprey ဗီဒီယို မှာ site ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ပြောင်းလဲနေသောအသင်းအဖွဲ့ဝင်များရပါလိမ့်မယ် #IBC2018 ဆွေးနွေးမှုနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများသည်။ သငျသညျသောများစွာသောဖြေရှင်းချက်တွေ့ဆုံများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင် Osprey ဗီဒီယို ပြပွဲမှာတစ်ရက်နှင့်အချိန်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်သေချာစေပါပေးနိုင်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုတောင်းဆိုမှုကိုအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအဘို့အကဒီမှာသွားပါ။ www.ospreyvideo.com/index.php/news/meeting-request
ဒါ့အပြင်အကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ Osprey ဗီဒီယို'' s ကိုစက်တင်ဘာလ 28th thru ယခုအံ့သြဖွယ်အထူးနှုန်းများစျေးနှုန်း။ သငျသညျအဆုံးအသုံးပြုသူသို့မဟုတ် System Integration များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, ထိန်သိမ်း-တောင်ပေါ်မှာများနှင့်လယ်ကွင်းမော်နီတာ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်မည်သည့်ထူးခြားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အဖြေရှင်းချက်အဆုံးသတ်မည်သည့်အဆုံးမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းပါးအဘို့ဤအရပ်၌ Go: www.broadcastbeat.com/osprey-video-has-promo-pricing-available-now-thru-september-28th/
အေျကာင္းအရာ Osprey ဗီဒီယို:
Osprey ဗီဒီယို'' s ကိုပရီမီယံဗီဒီယိုရိုက်ကူးနည်းပညာရှည်လျားသောလုပ်ငန်း, အစိုးရနှင့်အာကာသဖို့, ထုတ်လွှင့်, အင်တာနက်တီဗီနှင့်စောင့်ကြည့်ထံမှအထိစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မစ်ရှင်-အရေးပါဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေမောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ အခုတော့သူ့ရဲ့ flagship ဖမ်းယူကတ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းအတွက်နည်းပညာကိုပိုပြီးရိုးရာ A / V ကိုအပါအဝင်, ဖောက်သည်များအားလုံး enviroments မှာအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက် ပို. ပို. မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များကျေနပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-streaming များနှင့် encoding ကထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏အဆုံးမှအဆုံးသို့လိုင်းများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သောပညာရေး, ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဝတ်ပြုမှုအိမ်များအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်မပြတ်, အရည်အသွေးမြင့်အဘို့ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်အစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသောဗီဒီယိုကပလီကေးရှင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော tools များက၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ် - IP ကိုကျော်ကဗီဒီယိုမှ စာတန်းထိုး, ကျော်လွန်ပြီးဖမ်းမိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး ... နှင့် 4K မိုဘိုင်း streaming များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.ospreyvideo.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-09-13
ယခင်: IBC2018 မှာ IP ကိုဟန်ပြများတွင်ပါမှ MediaKind
နောက်တစ်ခု: အလယျပိုငျးအတ္တလန္တိတ် SR စီးရီးက Wall-တပ်ဆင်ထားမဏ္ဍိုင်အော်ရီဂွန်-အခြေခံပြီးဇာတ်ရုံမှထောက်ပံ့ရေးအာကာသ-Saving ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်သိမ်း
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မေလ 2019 (215) ဧပြီလ 2019 (503) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
2019 NAB Show မှာဂေါ်ဒွန်စမစ် Keynote